Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogaadeniya Ee Gaalkacyo oo Kulan Muhiima Isugu Timid.
Jaaliyada Ogaadeniya Ee Gaalkacyo oo Kulan Muhiima Isugu Timid.
Posted by Wariye Qaran	/ January 25, 2020
waxaa Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka mudug ka qabsoomay . shir ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomalida Ogadeniya Ee Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobalka mudug.
Shirkan ayaa sidii caadada inoo ahayd waxa lagu fur furay wacdi diini ah iyo aayadaha quraanka kariimka oo uu kufaray Hogaanka arimaha diinta ee jaaliyada.
Gudoomiyaha jaaliyada Ogadeniya ee Gobalka mudug Halgame Muxiyadiin Cabdi qoolif ayaa madasha kajeediyay Warbixin dheer oo taabanaysa arimaha siyaasadeed iyo taariikheed ee halganka ogaadeeniya, wuxuu sidoo kale ka waramay marxalada Siyaasiga ee ururku ku jiro iyo qorshayaasha uu rabo uu ururku ku galo doorashada.
Waxaa hadalka qaatay Gudoomiyaha Dagmada bookh ee ONLF siciid moxamed sheekh osmaan oo asna dadka kubogaadiyay inay kaqaybgalaan doorashooyinka soo socda iyo inay kulaabtaan wadankii kana codeeyaan Goobta ugu dhaw.
siyaasi Gaacir oo kamid ah hawl wadeenada ugu waawayn ee bariga doollo ayaaa ku dheeraaday taariikhda halgan iyo sababtii aasaaska ururka, Gudoomiyihii hore ee Gobalka mudug xasan axmed khaliif ABGAALAW, ayaa madasha kasoo jeediyay kalmado mahad naq ah.
Waxaana ugu danbayn si Guul ah kusoo dhamaaday Shirkii ay soo qaban qaabisay jaaliyada Ogadeniya Ee Gaalkacyo ee gobalka mudug.